« La Francophonie en chantant » : nambabo ny fon’ny maro i Lalatiana | NewsMada
« La Francophonie en chantant » : nambabo ny fon’ny maro i Lalatiana
Hafa ihany ny Malagasy ! Niavaka ny fanamarihana ny Andro eran-tany ho an’ny frankofonia, ny 17 marsa teo tany amin’ny foiben’ny Unesco* any Paris. Na ny frankofonia aza no nohiraina, araka ny lohahevitra hoe “La francophonie en chantant”, nitondra hatrany ny mampiavaka azy ny Malagasy, raha ny tatitra avy amin’ny mpisolo tena an’i Madagasikara eo anivon’ity fikambanana ity.
Voatendry hanafana ity fotoana ity, niaraka tamin’ilay mpanakanto soisa, Nicolas Fraissinet, i Lalatiana, monina ny Frantsa rahateo. Nahafinaritra ny seho natolony noho ny fampiarahana ny feony, izay mifanakaiky kokoa amin’ny jazz sy ny blues, tamin’ny zavamaneno nentim-paharazana malagasy. Mbola nanamafy izany ny fahaizany naneho ny maha manan-karena ny mozika frankofona sy Malagasy.
Nanamarika ity fotoana, niarahan’ny Unesco sy ny OIF nikarakara, ity ny fitarihan’ny Malagasy ny vondrona frankofona eo anivon’ny Unesco. Nasongadina tamin’ireo kabary nifandimbiasana ny maha zava-dehibe ny handraisan’i Madagasikara ny fivoriana an-tampon’ny frankofonia, ny volana novambra izao.
*Unesco: Sampan’ny Firenena mikambana misahana ny fampianarana, ny siansa ary ny kolontsaina.